इतिहासले बिर्सिन नसकेका विख्यात तानाशाहहरु « Nepal Break
इतिहासले बिर्सिन नसकेका विख्यात तानाशाहहरु
काठमाडौं । नेपालमा मात्र होइन, नागरिक स्वतन्त्रता र मुक्तिको आकांक्षामाथि विश्वव्यापी रुपमा नै अतिक्रमण हुँदै आएको छ ।
सत्ताको स्रोत र साधनलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएर देशलाई बन्धक बनाउन इतिहासले बेलाबखत त्यस्ता तानाशाहहरु जन्माउँदै आएको छ। त्यस्ता तानाशाहहरुले देशको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा नै नागरिकमाथि दमनको अस्त्र उठाउने गरेका छन् ।
विश्वका शक्तिशाली मुलूकहरुमा जन्मिएका तानाशाहहरु आफ्नै विवेकद्वारा चल्ने गरेका छन्, यद्यपि, त्यो विवेक नागरिक स्वतन्त्रता र देशको हितविपरित हुने गर्दछ। तर, साना मुलूकहरुले जन्माउने तानाशाहहरु कठपुतली हुन्छन्। उनीहरु आफ्नै विवेकले चल्दैन ।
उनी त केवल शक्ति राष्ट्रको हितरक्षाको खेलौनाका रुपमा आफूहरुलाई कठपुतलीका रुपमा उभ्याउँछन्। नेपालमा संसद बिघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीजस्तै विश्वले त्यस्ता तानाशाहहरुबाट पटकपटक सास्ती भोगेको छ। त्यस्ता केही तानाशाह यस्ता छन्।
१. अडोल्फ हिटलर (जर्मनी)
हिटलर २० अप्रिल १८८९ अष्ट्रियामा जन्मिएका जर्मन राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी (नाजी) का नेता थिए ।
उनी विश्वका क्रूर शासकहरूमा गनिन्छन्। उनी सन् १९३३ देखि सन् १९४५ सम्म जर्मनीका चान्सलर तथा १९३४ देखि १९४५ सम्म नाजी जर्मनीका शासक थिए। हिटलर नाजीवाद तथा दोश्रो विश्वयुद्ध शुरू हुनुका केन्द्रीय पात्र थिए ।
उनी पहिलो विश्वयुद्धका अनुभवी थिए। उनले सन् १९१९ मा राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी (नाजी पार्टी) को सदस्यता लिए तथा सन् १९२१ मा सोही पार्टीको नेता बने। सन् १९२३ मा उनले एक “कू’’को असफल प्रयाससमेत गरेका थिए ।
सोही असफल ’कू’को कारण उनी जेलमा परे, जहाँ उनले आफ्नो संस्मरण मेरो संघर्ष लेखे। सन् १९२४ मा जेलमुक्त भएपछि उनी भर्साइल्सको सन्धिको कडा आलोचना गरी तथा बृहत जर्मन (विशेष गरी भाषिक कारणले), यहूदी बिरोधी र कम्युनिष्टविरोधी गतिविधिमा लोकप्रियता हासिल गरे ।
सन् १९३३ मा जर्मनीको चान्सलरमा नियुक्त भएपछि गणतान्त्रिक जर्मनीलाई नाजी विचारधारामा आधारित एकदलीय, अधिनायकवादी, निरंकुश शासनमा रूपान्तरण गरे। उनको उद्देश्य यूरोपमा एकतन्त्रीय नाजी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धका नाममा विश्वभरि नरसंहार मच्चाउनमा हिटलरको मुख्य भूमिका थियो। सन् १९३९–१९४५ सम्म चलेको विश्वयुद्धमा उनले आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गर्न खोजे। तर, सफल हुन सकेनन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजयपछि हिटलरले आत्महत्या गरेका थिए ।
२. मोहम्मद सुहार्ताे (इन्डोनेसिया)
सबैभन्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका नेता हुन् मोहम्मद सुहार्तो। सुहार्ताेले दशौं लाख कम्यनिस्टहरूको नरसंहार गरेका थिए ।
३१ वर्ष इन्डोनेसियाको राष्ट्रपतिको पदमा उनीमाथि १५ अर्ब देखि ३५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको थियो । मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिसमेत रहेका उनले पदमा रहँदा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको थियो।
उनको कार्यकालमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार आएको दखिएको थियो। तर उनले पदमा रहँदा देशभक्तिको भाव देखाउँदै १५ अर्ब देखि ३५ अर्बको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको थियो । उनले आफ्ना छोराहरु, परिवारका अन्य सदस्यहरु तथा नजिकका साथीहरुको कम्पनीलाई अत्यधिक आपूर्ति र कर छल्नका लागि सहयोग गरेको पाइएको थियो।
सन् १९९८ मा एसियामा देखिएको आर्थिक संकटको क्रममा इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुगेको थियो। दुई वर्षपछि सुहार्टोलाई ५५ करोड डलरको जरिवाना लगाइएको थियो र उनलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । सन् २००७ को जुलाई महिनामा उनीमाथि एक अर्ब ५० करोड डलरको मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसको केही महिनामा उनको निधन भएपछि यो मुद्दामा सुनुवाई भने हुन सकेन।
सन् २०१० मा इन्डोनेसियाको सरकारले सुहार्तोको परिवारबाट अन्य मुद्दाहरुसमेत गरी ३० करोड ७४ लाख डलर असुल उपर गरेको थियो। साथै उनका छोरालाई १५ वर्षको सजाय सुनाइएको थियो जसमा पाँच वर्षपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए।
३. बेनितो मुसोलिनी (इटाली)
सन् १८८२ जुलाई २९ मा इटालीमा जन्मिएका मुसोलिनी विश्वका विख्यात तानाशाह मानिन्छन्। उनले इटालीको एक फासिष्ट राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेका थिए। उनी हिटलरका निकट शासक थिए । दोस्रो विश्वयुद्धको नरसंहारका लागि उनी पनि जिम्मेवार मानिन्छन् ।
मुसोलिनी सन् १९२२ देखि १९४५ अप्रिलसम्म इटलीको शासक रहे । उनी इटलीका राष्ट्रवादी फासिस्ट पार्टीका प्रमुख थिए। कुनै समय मुसोलिनिीबाटै प्रेरित भएर हिटलरले नाजी पार्टी र राष्ट्रवादलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए।
तर, दोस्रो विश्वयुद्धको समयसम्म हिटलर निकै शक्तिशाली थिए र मुसोलिनी उनकै सहयोगमा आफ्नो सत्ता हाँकिरहेका थिए। विश्वयुद्धमा धुरी राष्ट्रका प्रमुख देशमध्ये जर्मनी, जापान र इटली थिए । मित्र राष्ट्रको फौज इटालियन पेनिन्सुलातर्फ अघि बढेपछि धुरी राष्ट्रको हार निश्चितजस्तै थियो ।
६१ वर्षीय मुसोलिनीले उपाय सोच्न थाले। उनी ब्रिटिस वा अमेरिकीहरुको हातमा पर्न चाहँदैन थिए। उनलाई थाहा थियो कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता उनको फासिस्ट पार्टीविरुद्ध लडिरहेका थिए र उनीहरुको हातमा पर्दा पनि युद्ध अपराधी करार हुने निश्चित थियो। त्यसैले उनी तेस्रो देशमा भाग्न चाहन्थे।
उनीहरु स्वीस बोर्डरसम्म पुगेका थिए। तर त्यहाँ पनि विद्रोहीहरु थिए। उनले मास्कले आफूलाई छोपेका थिए, केही जर्मन सैनिकसँगै अस्ट्रिया छिर्ने आशा थियो। तर उनको जुक्ती असफल भयो। विद्रोही कार्यकर्ताले उनी र पेटाक्कीलाई खोजी छाडे र गोली हाने। त्यसपछि जहाँ उनीहरुको शवलाई ट्रकमार्फत् मिलान पठाइयो, जहाँ उनीहरुलाई सबैले देख्न सक्नेगरी सार्वजनिक स्थलमा उल्टो गरी झुन्ड्याइयो ।
४. डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिका)
सन् १९४६ जुन १४ मा जन्मिएका ट्रम्प अमेरिकाका ४५ औं राष्ट्रपति भए । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका ट्रम्प राजनीतिमा भने मुढी र क्रुर शासकका रुपमा आफूलाई दर्ज गराएर बिदा भए ।
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको इतिहासमा ट्रम्प नै यस्ता राष्ट्रपतिमध्ये एक हुन्, जो दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन नसकी घर जानेछन् । ट्रम्पले आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउने नारासहित ४५ औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
तर, निर्वाचित भएदेखि नै उनले विवादास्पद काममा हात हालेका थिए। मेक्सिकोको सीमानामा पर्खाल लगाउन, आप्रवासीहरुलाई देश निकाला गर्न र उनीहरुविरुद्ध कठोर कानून बनाउन उनले चालेको कदम भने सफल हुन सकेन ।
आफ्नो कार्यकालमा ट्रम्प यति धेरै आलोचित भए कि विश्वभरि उनी हाँसोको पात्र बने । कसैले मूर्खहरुको उदाहरण दिनुपर्दा ट्रम्पको नाम लिने विश्वव्यापी परिस्थिति बन्यो । कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि उनले बेवास्ता गरे। सुरुमा चिनियाँ भाइरसको नाम दिएर कोभिडलाई हाँसोमा उडाएका उनकै कारण अमेरिका कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त भयो ।
अन्तिममा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा समेत उनले आफ्नो निरंकुश चरित्र देखाए । निर्वाचनमा पराजित हुँदासमेत ह्वाइट हाउस छोड्दिनँ भन्ने उनको जिद्दीले लोकतन्त्रको सर्वमान्य चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्यो। आज उनी २१ औं शताब्दीका तानाशाहका रुपमा स्थापित भएका छन्।
५. जंगबहादुर राणा (नेपाल)
जंगबहादुर राणाको जन्म वि.सं. १८७४ असार ४ मा भएको थियो। उनी नेपालका ८औं प्रधानमन्त्री हुन्। वि.सं. १९०३ सालमा भएको कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वपछि जङ्गबहादुर नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा एक्कासी शक्तिशाली हुन सफल भएका थिए ।
नेपालको शासन व्यवस्थामा राजा राजेन्द्र शक्तिशाली भएर पदासिन रहेको समयमा जङ्गबहादुरले राजदरबार भित्र आन्तरिक विद्रोह गरेर युवराज सुरेन्द्रलाई गद्दी आरोहण गराइ दामोदर पाँडे, भीमसेन थापा, रणजङ पाँडे र माथवरसिंह थापाको नीति सकारेर आफूलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाएका थिए।
वि.सं. १९१३ श्रावण १८ मा जङ्गबहादुरले मुख्तियार पदबाट राजीनामा दिएर श्रावन २४ गते राजा सुरेन्द्रबाट कास्की र लमजुङको श्री ३ महाराज पद प्राप्त गरेका थिए । महाराज पद प्राप्त गरिसकेपछि नै उनलाई श्री ३ जङ्गबहादुर कुँवर राणाजी भन्न थालिएको हो ।
श्री ३ महाराजको लागि श्रीपेच बनाउन लगाई जनताको छोराद्वारा श्रीपेच लगाउने जङ्गबहादुर पहिलो व्यक्ति थिए । नेपालमा राणा शासनको जग बसालेर १०४ वर्षसम्म पारिवारिक शासनशैलीको आरम्भ गर्ने व्यक्ति यिनै हुन् ।
बेलायती शासकहरूका प्रिय रहेका जङ्गबहादुरले आफ्नो शासनकालको समयमा दरबारिया कट्टर विरोधीहरूलाई तह लगाएर एकतन्त्री शासन चलाएका थिए। बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणबाट फर्केपछि उनले नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानूनमा समेत पश्चिमी प्रभावको छाप छोडेका थिए। उनी नेपालका विख्यात तानाशाह मानिन्छन्।
६. फर्डिनान्डो मार्कोस (फिलिपिन्स)
फिलिपिन्सको १० औं राष्ट्रपति फर्डिनान्डो मार्कोसले मुलुकमा २१ वर्ष शासन गरेका थिए। उनले पनि फिलिपिन्समा लाखौं कम्युनिस्टहरूको नरसंहार गरेका थिए ।
आफ्नो पदमा रहँदा ५ अर्ब देखि १० अर्बको आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको थियो। उनले कार्यकालमा फिलिपिन्सको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बन्न पुगेको थियो। विश्व बैंकका अनुसार उनले मुलुकका विभिन्न छ सञ्जालको प्रयोग गरी नाजायज आर्थिक लाभ लिने गरेको पाइएको थियो ।
उनले निजी कम्पनीहरु हत्याउने, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा मानोमानी गर्ने नीति ल्याउने, सरकारी ऋण आफ्नो नजिकको निजी कम्पनीहरुलाई प्रदान गर्नेलगायतका कामहरु गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरको बताएको छ। पदबाट मुक्त भएपछि मार्कोस भागेर अमेरिका पुगेका थिए। उनको अमेरिकामै निधन भएको थियो। पछि विभिन्न सरकारहरुको सहयोगमा फिलिपिन्सले ४ अर्ब २० करोड डलर भने उनीबाट असुल गरेको थियो। उनी पनि विश्वका तानाशाही शासक मानिन्छन् ।
७. मोबुटु सेसे सेको (कंगो)
मोबुटु सेसे सेकोले ३२ वर्ष कंगोको शासन गरेका थिए। पटकपटक मुलुकमा ‘कू’ गरी उनले शासन आफ्नोे हातमा लिएका थिए। उनको कार्यकालमा कंगो थेग्नै नसक्ने महंगाीको मारमा परेको थियो ।
साथै अर्थतन्त्र पनि निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। उनले पदमा रहँदा ४ अर्बदेखि ५ अर्बसम्मको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको थियो। उनी सबैभन्दा भ्रष्ट अफ्रिकन नेतामा गनिने गर्छन् ।
सन् २००९ मा स्विट्जरल्याण्डले मोबुटुको ६६ लाख ८० हजार डलरको सम्पत्ति कंगोलाई दिएको थियो। जतिबेला मोटुबुका छोरा मुलुकको उपप्रधानमन्त्री थिए। सहकार्यको अभावमा सो कोष मोटुबुको परिवारलाई प्रदान गरिएको थियो। उनी पनि विख्यात तानाशाह मानिन्छन्।
८. सानी अबाचा (नाइजेरिया)
नाइजेरियाका पूर्वराष्ट्रपति स्यानी अबाचाले आफ्नो पदमा रहँदा ३ अर्ब देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । ५ वर्ष मुलुकको शासन गरेका उनको कार्यकालमा नाइजेरियामा मानव अधिका उलंघनका केही मुद्दाहरु उनीमाथि लागेको भए पनि उनले मुलुकको बाह्य ऋण भने केही घटाएका थिए ।
उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेश कम्पनीबाट प्रत्यक्षरुपमा लिएको विश्वबैंकले बताएको छ साथै उनले केन्द्रीय बैंकबाट पनि प्रत्यक्षरुपमा लाभ लिएको विश्व बैंकले बताएको छ । अहिलेसम्म नाइजेरियाको सरकारले २ अर्ब ५० करोड डलरको सम्पत्ति उनीबाट उठाएको छ र अझैश पनि उनको केही मुलुकमा रहेको सम्पत्ति उठ्न बाँकी रहेको छ।
९. जिने अल–एबाइडिन अलि (ट्युनिसिया)
जिने अल–एबाइडिन अलिले ट्युनिसियामा २३ वर्ष शासन गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा एक अर्ब देखि २ अर्ब ६० डलरसम्मको भ्रष्टाचार गरेको खुलेको थियो । मुलुकमा निकै लोकप्रिय रहेका उनले कुनै समयमा उनले ट्युनिसियाका सबै निजी क्षेत्रहरुको नाफाको २१ प्रतिशत लिने गरेको खुलेको थियो ।
अहिलेसम्म ट्युनिसियाले उनले गरेको भ्रष्टाचारमध्येको ६ करोड ८८ लाख डलर असुल गरेको छ। अझै पनि स्वीट्जरल्याण्डमा २ करोड ८५ लाख र क्यानडामा २६ लाख डलर रकम फिर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ।
१०. केपी शर्मा ओली (नेपाल)
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जन्म विसं २००८ साल फागुन ११ गते भएको थियो। उनी २०७२ साल फागुन ३ गते नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन एमालेको २०७१ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनले उनलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि उनी नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। प्रधानमन्त्री बन्न आफैले गरेको सहमति नमानेका उनले संसदको दवावपछि उनले २०७३ असारमा सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए ।
२०७४ फागुनमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका उनले २०७७ पुस ५ गते संसदको बिघटन गरेका छन् । ओली गणतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद बिघटन गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। उनको कार्यकालमा देशमा भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड भएका छन् ।
वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार, मेडिकल उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार, यती होल्डिङमा भ्रष्टाचारजस्ता करीब २ दर्जन भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको ओली सरकार नेपाली इतिहासकै भ्रष्ट सरकारको सूचिमा समेत दर्ज भएको छ। सो कुराको पुष्टि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत् गरिसकेको छ।